🥇 ▷ 8-da taleefoon ee ugu sumcadda badan Android taariikhda ✅
8-da taleefoon ee ugu sumcadda badan Android taariikhda
Toban sano ayaa ka soo wareegtay dhalashadii Android iyo wixii ka dambeeyay, kacaan dhan ayaa yimid qeybta taleefanka moobaylka taas oo korortay kuna baaba’day noocyo badan oo sumcad ku leh nidaamka hawlgalka Google, taasina waxay ku dhaafeen wadada telefoonada casriga ah ee astaan ​​u leh sheekada.
Dhameystirka dabagalka in laga bilaabo Xataka aan qabanayno ilaa dhalashadeena tobnaad ee Android, waa marki loo fiirsado taleefannadii Android oo muddooyinkii ugu muhiimsanaa ahaa tobanka sano ee lagu muujinayo sababaha ay u ahaayeen wakiil ama dhiirigelin u ah moodooyinka mustaqbalka.
Waxaan ku bilownay dufcaddii ugu horreysay ee taleefannooyinka Android halkaasoo ay ku jirto soo dhaweynta loo yaqaan ‘HTC Dream’ ee nidaamka qalliinka adduunka inkasta oo dhulal kale sida Isbaanishku ay ahayd inaan sugno HTC Magic oo ay iibisay shirkadda Vodafone. bartamihii sanadkii 2009 ama HTC Hero suuqgeeyay waxyar kadib Orange.
Waxay ahayd taleefan casri ah oo muujinaya 3.2 inji (180 dpi), 512 MB oo xusuusta gudaha ah lagu fidin karo iyada oo loo sii marayo micro SD, 288 MB ee RAM, 1 340 mAh batteriga, isku xirnaanta 3G iyo kamarad 3 megapixel ah.
Nooca labaad ee Galaxy S wuxuu ahaa kan ka caawiyay Samsung inuu noqdo mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha suuqa ugu sareeya, gelitaanka 2011 duubista iibinta iyo soo rogista xayeysiinta sida HTC Sensation ama LG Optimus 2X.
Samsung Galaxy S2 waxay lahayd shaashad ah 4,3 inji SUPER AMOLED, 1GB Ram. 16 ama 32GB oo kaydinta gudaha ah oo la ballaadhin karo, 8 megapixel camera (f / 2.6) iyo in kasta oo ay la timid Android 2,3,4, waxaa lagu cusbooneysiiyay bilooyinkii Android 4.1.
Laakiin Samsung waxay haysatay xiddig kale oo isla sannadkaas bilaabay isla markaana isticmaalaya markiisii ​​ugu horreysay ee Galaxy Note, oo ah jiheeyaha casriga shaashado waaweyn oo wakhtigaas ka bilaabmay 5.5 inji, iyo midka kaliya ee go’aansaday inuu sii wado sharadka S-Pen oo ah shey kaladuwan oo suuqa ka jira.
Qoyska Nexus, Nexus 4 wuxuu ahaa midka ugu dhameystiran, soo jiidasho leh isla markaana leh qiimaha ugu halista badan bishaas November.
Bishii Maarso ee 2013 HTC ayaa markale noqotay bartilmaameedka naqshada iyada oo loo isticmaalayo HTC One (M7 )keedii ugu horreeyay. Jirkeeda birta aan xirnayn ama xargaha gadaal ee u adeegi lahaa in lagu meeleeyo anteenadu waa walxo ilaa maanta jira. Xitaa, sanad kadib, M8 wuxuu noqon lahaa midkii ugu horeeyey ee laga soo xigto kamarad laba geesood ah oo aan la sii deyn ilaa 2016.
Shaashaddeeda ayaa kor u kici laheyd 4.7 inji (469 dpi), waxay leedahay 2 GB oo RAM ah, 32 GB oo ah xasuusta gudaha waxayna ahayd midkii ugu horreeyay ee ku khiyaameeya kamarad natiijooyin aad u wanaagsan iyadoon la dagaallamin si loo kordhiyo megapixels si loo siiyo mudnaanta weyn u leh cabirka pixel. Afkaaga hore Dhawaqa codka Waxay kaloo calaamadiyeen ka hor iyo ka dib markay maqalka cod tahay.
Bishii Febraayo 2013, mid ka mid ah moodooyinka aan shardiga lahayn ayaa sidoo kale la soo bandhigay. Sony Xperia Z oo leh naqshad muraayadeed oo leh muuqaal aan loo malayn karin ilaa daqiiqaddaas: taleefannada mobilada ayaa la bilaabay in la sameeyo biyo lagu kari karo in kasta oo waqti ka dib waxaa dib loo sharxay si looga fogaado waxyaabaha la yaab leh oo aakhirkii waxaa loo yaqaanay biyo u adkaysanaya in kasta oo heerka difaacgu uu ahaan doono mid ficil ahaan la mid ah.
Isla sanadkaas 2013, LG wuxuu soo bandhigay G2 nashqadeeye rWaxaan bartaa xarkaha ugu yaraan Looma baahna in lagu sharaxo qaababka shaashadda dheer ee hadda jira, ee shaashadda 5.2-inji ah qiyaastii 76% ee hore.
In kasta oo garsoorayaasha intooda badani yihiin moodooyin heer sare ah, soo laabashada Motorola ee taleefannada gacanta iyadoo Moto G ay mar kale calaamad u ahayd heer ay mobiillada bartamaha-bartamaha ku caan baxeen adoo samaynaya telefoonka raqiis ah, sidoo kale wuxuu ahaa mid dareere ah Waad ku mahadsan tahay sida aad uga go’an tahay nadiifinta Android. Waxay ku dambeyntii noqotay iibiyaha ugu fiican sanadka 2014.
Iyada oo fasax laga haysto Sharp Aquos, Xiaomi Mi Mix wuxuu noqday mid kale oo khalkhal galinaya naqshadeynta Thanks to Philippe Starck oo ku dhowaad gebi ahaanba dhammeystiray xirmooyinka. Tani waxaa lagu sameeyay xalka hal abuurka ah sida tikniyoolajiyadda loo yaqaan ‘Cantilever piezoelectric ceramic acoustic technology’ oo beddeleysa hadal dhaqameedka ama dareemayaasha u dhawaa ee hadda qarsoon shaashadda gadaashiisa.
Waa maxay taleefannada kale ee aad ku dari lahayd liiska ugu caansan ee Android?